Semalt: Iindlela zokuhlalutya iNtsebenzo ye-SEO
Sivame ukubeka iintliziyo zethu ekwenzeni okuthile, kwaye ngokwemvelo, sicinga ukuba kuya kuba kuhle. Nangona kunjalo, oko akusoloko kunjalo. Nangona sibeke iinzame zethu kuyo, sisafuna ukuvavanya. "Ukwenza impazamo ngumntu." Singazenza iimpazamo, kwaye indlela enye yokufumana iimpazamo kwiwebhusayithi kukusicazulula.
I-SEO ikwayinto ebeka ixesha lethu kunye nomgudu ekwenzeni. Ku- Semalt , sikubonelela ngeenkonzo ze-SEO EBALULEKILEYO , kodwa sikwathabatha inyathelo lokubuyela emva nokuvavanya. Ngale ndlela, sinokubona iipasile ezinokwenzeka kwaye sihlengahlengise, uqinisekisa ukuba ufumana uhlaziyo lwewebhusayithi oluchanekileyo. Ukwenza lo mnikelo ugqibe, singaphuhlisa iwebhusayithi yakho kwaye sizilungise zonke iimpazamo onokuba unazo.
Logama nje unezixhobo ezifanelekileyo kunye nobungcali, unokwenza uhlalutyo lwakho lwe-SEO ngokwakho, kodwa ukuba awukwenzi, kungcono ufumane uncedo kwiingcali ezinjengeSemalt. Emva kwayo yonke loo nto, awuyi kufuna ukuba wonke umsebenzi wakho onzima uye phantsi kumjelo ngokuhlaziywa kwe-SEO.
Ukuhlalutya i-SEO yakho kugubungela uluhlu olubanzi lwezinto onokuzikhetha, kwaye unokuba ngumahluko phakathi kwephulo le-SEO eliphumeleleyo kunye nelinye lokusilela. Jonga i-SEO, njengokuzama ukwenza loo mntu ukuba akuqaphele. Ekuqaleni, ufana nenkanyezi ekude kwindalo enkulu emnyama, kodwa uqala ukuzama. Mhlawumbi isicwangciso sakho sokuqala asisebenzi, kodwa emva koko uphinde uphinde uzame enye indlela de ube lilanga emehlweni alo mntu. Yiloo nto yonke iwebhusayithi efuna, kwaye uhlalutyo lwe-SEO sisixhobo ukuze ubone ukuba indlela yakho yokuqala iyasebenza. Ngaphandle kolu hlaziyo, awunakuqaphela ukuba indlela yakho iyasilela nangona kungalunganga.
Kodwa ngaba konke ukuhlaziya kwe-SEO malunga?
Kukho intetho ethi mhlawumbi ukhe wayiva kwishishini elisebenza ebomini uqobo. Ihamba ngoluhlobo "ukuba awukwazi ukuyilinganisa, awukwazi ukuphucula" ukuba yeyona nto ilungileyo, kufuneka wazi ukuba ulunge kangakanani xa kungenjalo, ngaba uhamba njani?
Ukwazi ukulinganisa ukuba i-SEO yakho iqhuba kakuhle kangakanani kubalulekile ekufumaneni iwebhusayithi yakho kwiphepha lokuqala, kunye nenqanaba eliphezulu. Njengekhadi lengxelo, libonisa amandla kunye nobuthathaka bakho ukuze uphucule. Ngethamsanqa amashishini, unokujonga ukuba zilungile kangakanani izakhono zakho zokwenza i-SEO ngesixhobo esibizwa ngokuba yiGoogle Analytics.
Nangona sicebisa ukuba usebenzise uSemalt, ungakwenza oku ngokwakho, inikiwe ukuba uyazi ukuba ungayilinganisa ngantoni, uzisebenzisa njani izixhobo, kunye nendlela yokuphumeza izilungiso kwiwebhusayithi yakho. Ukuba awukwenzi, nxibelelana ngononophelo kukhathalelo lwabathengi beSemalt okanye iqela lethu elimangalisayo lokubhala apha. Singahlalutya isiphumo sakho kwaye siphumeze izilungiso zaso, ekubeka kwindawo ephezulu apho ukhona.
Kodwa ukuba ufuna ukufunda nje malunga nokuba kuthetha ntoni ngohlalutyo lwe-SEO, usesendaweni elungileyo.
Ukuba unqwenela ukwenza uhlalutyo lokusebenza kwe-SEO ngokwakho, Nazi izinto ekufuneka uzijonge:
Amaxesha amaninzi, ulwazi ngokwenene ngamandla. Ngaphandle kolwazi lokulinganisa into ebalulekileyo, uya kuphela kwiziphumo ezininzi ezinganyanzelekanga ngokupheleleyo. Kuya kufuneka ukuqonde oku ngaphambi kokuba ungene kwicandelo lobuchwephesha lohlalutyo lwe-SEO.
Ngexesha okanye emva kohlalutyo lwe-SEO, ixhaphake kakhulu kwii-newbies kunye neengcali ezinamava ukuba ngamanye amaxesha zibanjwe kwi-metity ye-metity yayo. Ubanjwa rhoqo ngokuziva unekratshi kwaye ufezekisile malunga nokuba zinkulu kangakanani iphepha lakho lokujonga. Nangona kunjalo, awuyeki ukuhlalutya umgangatho walezo zixhobo zokujonga iphepha. Endaweni yoko, kufuneka ulinganise ngaphaya konqakrazo lwakho, ulinganise nendibaniselwano nako.
Inye metric ebalulekileyo yokuzibandakanya ekufuneka uyijongile yinqanaba lokugoba. Oku kubonisa inani labasebenzisi abazifumanayo iphepha elinye kwaye baqhubele phambili. Ngamanye amagama, kubonisa abafundi abonelisekileyo ngaphandle kokuhamba ngamanye amaphepha kwiwebhusayithi yakho. Ngokungafaniyo nento ocinga ngayo, lincinci inani lamaxabiso asezingeni eliphambili, ngcono. Sonke sikhangele ulwazi oluthile, kwaye xa sicofa ikhonkco, kufuneka sifunde amaphepha aliqela ngaphambi kokuba sifumane ulwazi esiludingayo. Oko akupholanga, kwaye amaxesha amaninzi, ulahlekelwa ngumsebenzisi. Xa uvavanya umyinge wakho wokuphaphaza, nantoni na phakathi kwe-26% ne-40% ilungile, kwaye nantoni na enkulu kune-70% ithathwa njengembi, kwaye unokufuna ukusebenza kuyo.
Ukuhla okanye ukuthoba umgangatho kubalulekile kuba kukubonisa ukuba abafundi bakho banomdla kwinto oyithethayo nokuba uyakholelwa ngokwaneleyo.
Ukujonga iphepha lezinto eziphilayo
Ukujonga ukujonga kwakho iphepha lezinto eziphilayo ikwayenye indlela ebalulekileyo yokujonga ukusebenza kwe-SEO ngokubanzi. Inani eliphakamileyo lokujonga iphepha lithetha ukuba i-SEO yakho iyasebenza, kwaye izisa abasebenzisi abaninzi kwiwebhusayithi yakho. Inani eliphantsi lokujonga iphepha, kwelinye icala, lithetha ukuba iwebhusayithi yakho ayibonakali xa kukhangelwa amagama aphambili, okanye iwebhusayithi yakho ayinamtsalane ngokwaneleyo ukuba yenza ababukeli bacofe.
Amaxesha amaninzi, ezi ziimpawu ezifumana ukungaqwalaselwa ngabahlalutyi abatsha bokusebenza kwe-SEO
Uhlalutya njani ukusebenza kwewebhusayithi ye-SEO
Ukuhlaziya usebenzisa izixhobo zohlalutyo lwe-SEO
Le yenye yezo zinto awunakukwenza ngaphandle koncedo. Awunakufunda kwiwebhusayithi yakho kwaye uze nokugweba ngokuchanekileyo malunga nendlela esebenza kakuhle ngayo i-SEO yakho. Ukwenza oko, udinga izixhobo.
Kukho izixhobo ezahlukeneyo kwi-intanethi onokuzisebenzisa ukuhlaziya i-SEO yakho. Ukuba ukhetha ukugxininisa amandla akho kwenye into, unokuwabela lo msebenzi uSemalt. Siya kufumana ukusebenza kwe-SEO yakho kuhlalutywe akukho xesha ngaphandle kokuthatha naliphi na ixesha lakho. Siza kwenza naluphi na naluphi na ulungiso ukuqinisekisa ukuba iwebhusayithi yakho iphezulu, apho ikhoyo.
Enye yezona zixhobo zihlalutyo ye-SEO yi-Google Analytics. Ukongeza kwinto yokuba yeyabephethwe nguGoogle, yona intle kangaka, ikwanasimahla.
Xa uhlalutya i-SEO yakho, inyathelo lokuqala lithatha inyathelo lokubuyela emuva ukujonga ukusebenza kwakho kwe-SEO ngokubanzi. Ngokufunda utshintsho olwenzeka kwitrafikhi egcweleyo ekuhambeni kwexesha, ungabonisa ukuba ngaba okanye icebo lakho le-SEO liyasebenza na.
Ukubeka iliso kwitrafikhi yakho yemvelo
Le yeyona ndlela icacileyo yokujonga ukuba iwebhusayithi yakho ye-SEO isebenza kakuhle ngokubona inani lokuchofoza olifumana. Olu hlalutyo lusebenza kokubekwa kwi-organic kunye nokuhlawulwa kwewebhusayithi. Ukuba usebenzisa iGoogle Analytics, ungakhangela ukugcwala kwitrafikhi yakho ngokuya ekufumaneni yonke imigwaqo. Ukuba ulandela la manyathelo, kuya kufuneka ukwazi ukubona ukuba i-traffic yakho iqhuba njani. Uya kukwazi ukubona ukuba iqhuba kakuhle kangakanani i-organic traffic xa kuthelekiswa nokudluliselwa okanye amakhonkco kwiintengiso zemidiya yoluntu.
Kuthetha ukuba i-SEO yakho ayenzi kakuhle kakhulu kumgangatho wokukhula okanye ukuhla kwezithuthi, kwaye kuya kufuneka uhlengahlengise imixholo yewebhusayithi kunye nezicwangciso ze-SO.
Ukubeka iliso kwimigca yakho yangasemva
Ngokuthandwa okukhulayo kwewebhusayithi yakho, kuya kufuneka uqaphele ukwanda kwenani le-backlinks kwiwebhusayithi yakho. Nangona kunjalo, kuya kuba ngcono ukuba awuzange ukoyiswe zezi ngenxa yokuba umgangatho wale miqolo iphambili ubalulekile. Jonga igunya lesizinda sewebhusayithi elibonelela ngezi ziqokelelo kwiwebhusayithi yakho. Ngokuhlalutya umxholo apho zibekwa khona ezi backlink, unombono wokuba abantu bacinga njani ngewebhusayithi yakho. Xa uziqonda ezi, unokutshintsha umbono okanye uthathe ithuba elifanelekileyo.
Hlaziya i-SEO ngamagama ayo aphambili
Endaweni yokuhlalutya i-SEO yewebhusayithi yakho ngendlela yayo yonke kunye nenani lokucofa likufumanayo, unokuyihlalutya ngenani kunye nomgangatho wamagama aphambili asetyenzisiweyo kuyo. Oko kwathethwayo, iGoogle Analytics ayenzi umsebenzi oncomekayo ibonisa idatha yegama eliphambili, ke unokufuna ukufumana esinye isixhobo sohlalutyo lwe-SEO.
Xa uhlalutya iwebhusayithi yakho kwaye ufumane umphumo ongonwabanga ngayo, into yokuqala oyenzayo kukufumanisa ingxaki. Amaxesha amaninzi, yenye yezi zimbini.
Kuba amagama aphambili awela phantsi komxholo, benza indlela iwebhusayithi yakho ebonisa kakuhle iGoogle okanye iindwendwe ukuba kutheni iwebhusayithi yakho ifuneka. Kodwa ukuze wazi indlela elungileyo amagama akho aphambili, kufuneka uqhube uhlalutyo. Oku kukubonisa ukuba amagama akho aphambili akatsho, ukuba akwanelanga okanye ukuba abafikanga kubaphulaphuli bakho. Ngale ndlela, unokusebenza kumxholo wakho ngokufanelekileyo kwaye ufumane ezo nqakrazo.
Ukufumana iindawo zakho ezaphukileyo amaphepha
Amaphepha awaphukileyo yenye indlela eqinisekileyo yokulahleka iindwendwe kwindawo yakho. Xa iindwendwe zingakwazi ukufikelela kwiphepha elinolwazi abalifunayo, baphulukana nomdla kwiwebhusayithi yakho iphela. Oku kuthetha ukuncitshiswa kwendlela kunye nabathengi abanokubakho. Ukulungisa iimpazamo ezaphukileyo zamaphepha kubaluleke kakhulu, kwaye kwiwebhusayithi engaphezulu kwamaphepha ayi-100 0r, iba nzima kakhulu. Yiyo loo nto kufuneka uhlalutye iwebhusayithi yakho ukuze uyifumane.
Hlaziya isantya sendawo yakho
Isantya sesiza yenye yezinto eziphambili ekufuneka uyihlalutyile okanye ujonge kuzo xa ufunda uhlalutyo lwakho lwewebhusayithi. UGoogle uzithanda ngokuzenzekelayo iiwebhusayithi ezikhawulezayo, ke ukuba ufuna ukuba kwinqanaba okanye ubonakale kwiphepha lokuqala, iwebhusayithi yakho kufuneka ikhawuleze ngokwaneleyo. Sebenzisa isixhobo sokuhlalutya esifana nesantya sephepha elinokukuxelela ukuba liza kuthatha ixesha elingakanani umthwalo wakho wewebhu. Ukuphucula isantya sewebhusayithi yakho kuphucula amava akho omsebenzisi kwaye ufumane abasebenzisi abaninzi ukuba bahlale kwindawo yakho. Kodwa iwebhusayithi ecothayo iya kukhathaza iindwendwe zakho kwaye ibenze ukuba bahambe ngaphambi kokuba umxholo wakho ubonakale kwizikrini zabo.